Dowlada Soomaaliya oo shaacisay dalalka deynta ugu badan kuleh – Kismaayo24 News Agency
Dowlada Soomaaliya oo shaacisay dalalka deynta ugu badan kuleh
by admin 10th November 2019 10th November 2019 0119
Wasiirka Wasaarada maaliyada Soomaaliya Cabbdirahman Ducaale Bayleh ayaa maanta qabtay Barnaamijka la kulan ‘WASIIR-KAAGA’ oo bil waliba uu qabto isla markaasna uu Bulshada ku siiyo faah-faahinta Maaliyadeed ee Dalka iyo waxa u qabsoomay Bishii ina dhaaftay.
Wasiirka ayaa soo bandhigay natiijadii ka soo baxday shirarkii uu la soo galay madaxda hey’ada ha kala ah, IMF, World Bang iyo Bangiga Horumarinta Afrika.
Waxaa uu sidoo kale bulshada la wadaagay hiigsigsiyada dowlada ee ku aadan hanaanka Deyn-Cafinta rajo wanaagsan ay dowladu ka leedahay sanada soo socota ee 2020, sidoo kale waxaa Miisaaniyadda Dalka ee 2020 mushaar kordhin loosameeyay Ciidanka Qalabka sida ee Soomaaliyeed.
Dhanka kale waxa uu wasiirka sheegay dalalka Soomaaliya lacagta ugu badan kuleh, Mareykanka ayaa soomaaliya kuleh 1Bilyan, Ruushkana 700Milyan, Talyaanigana 600Milyan, halka France ay Soomaaliya ku leedahay 400milyan.
SAWIRRO: Daawo sida loogu soo dhoweeyay Beledweyne Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh.
Dhagayso:- Madaxweynaha Hirshabeelle oo kahadlay Diyaaradii ay saarnayeen madaxdii hore ee Soomaliya iyo hakadka galay.
Daawo: Maxay ka Yiraahdeen dadka Ku nool Magaalada Nairobi Heshiiksii ay kala Saxiixdeen Kenya iyo Beesha Sadde
admin 28th April 2016
AKHRISO:-Maxkamadda Galmudug Oo Xukun Xabsi Ah Kuriday Ajaanib Lasoqabtay
War Cusub: Maxaad ka Taqaan Cahdiga Lagu Magacaabo (IORA) oo Dowlada Soomaliya ay Saxiixday??+Sawirro
Tifaftiraha K24 28th October 2016